Huawei P Smart + 2019: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Huawei P Smart + 2019: Akara ọhụrụ ọhụụ ahụ
Na njedebe nke 2018 Huawei wepụtara ekwentị ọhụụ maka etiti, ihe P Smart 2019. Nhọrọ dị mma n'ime akụkụ ahịa a, nke nwere ezi mmetụta nakwa na nyocha gị. Dị ahụ hapụrụ anyị ugbu a na onye nọchiri ekwentị a, n'ihi na ha gosipụtara Huawei P Smart + 2019 ugbu a. Ọ bụ a dịtụ mma version nke gara aga ekwentị.
Esemokwu ndị dị n’etiti ụdị abụọ ahụ adịchaghị oke. Ebe ọ bụ na Huawei P Smart + 2019 a na-eji otu ụdị ahụ ma kesaa akụkụ buru ibu nke nkọwa nke usoro gara aga. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, otu n'ime ihe ịtụnanya dị na azụ dị na azụ. Dị ka e jiri igwefoto atọ rụọ ọrụ.
Anyị nwere ike ịhụ otu igwefoto dị iche iche si enweta ọnụnọ n'etiti etiti na gam akporo. Huawei esonye ugbu a n'iji igwefoto atọ a na ngwaọrụ. Ọ bụ mgbanwe dị ukwuu nke Huawei P Smart + 2019 a hapụrụ anyị. Ọ bụ ezie na ọ ka bụ nhọrọ nke nnukwu mmasị na mpaghara etiti a na gam akporo.
1 Nkọwapụta Huawei P Smart + 2019
Nkọwapụta Huawei P Smart + 2019
Igwefoto na-aga n'ihu:MPN 24 MP + 16 MP + 2 MP
Ya mere, isi mgbanwe anyị hụrụ na ama a na-elekwasị anya na igwefoto ya. Ejikọtara ọnụ nke ihe mmetụta dị iche iche, ịkụ nzọ na ngụkọta nke atọ na nke a. Nke na-eme Huawei P Smart + 2019 ihe zuru oke na mpaghara a, ma e jiri ya tụnyere ụdị nke gara aga.
Ihe omuma ohuru a nwere anya ato ato, nke nwekwara mkpebi di elu. Onye ọ bụla n’ime anya m ndị a nwere ebumnobi a kapịrị ọnụ, ya mere nchikota dị ike karị. N'ụzọ dị otú a, onye isi ihe mmetụta bụ akụkụ nkịtị, nke abụọ bụ ultra wide angle mgbe na nke atọ bụ ihe mmetụta nke na-ahụ maka ịlele omimi na imeziwanye eserese foto n'oge niile.
Na mgbakwunye, dịka atụ anya ya, ọgụgụ isi bụ ọrụ maka ịkwalite igwefoto nke Huawei P Smart + 2019. O nwere ikike ịmata ihe nkiri 500 dị iche iche, na edemede onyonyo 22. Yabụ ịrụ ọrụ nke ọma dị mma n'aka ha na nke a.
Dịka ụdị nke ọzọ, a na-emepe Huawei P Smart + 2019 a na agba abụọ, ma ya na gradient a ma ama nke akara ahụ mere ejiji n'afọ gara aga. E nwere nanị otu Nchikota nke ngwaọrụ na okwu nke RAM na esịtidem nchekwa. Ọ bụ ezie na n'oge a anyị enweghị enweghị ozi gbasara ụbọchị ịhapụ ya ma ọ bụ ọnụahịa ya.
Anyị na-atụ anya ịmatakwu banyere ya n'ime awa ole na ole ma ọ bụ ụbọchị ole na ole. Huawei doro anya na inye ozi ndị ọzọ na nke a n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P Smart + 2019: Akara ọhụrụ ọhụụ ahụ
Anaghị akwado Hangouts na Wear OS
A ga-enye Huawei P30 Lite na March 14